Shiinaha meeldhexaadka ah hawada uumi-baxa hawada uumi-baxa XK-15SY warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. XIKOO
XK-13 / 15SY qaboojiye hawo uumi-bixiye ah oo dibadda ah ayaa ah nooc caan ah oo ganacsi meherad qaboojiyaha la qaadan karo ah, waxay hoos u dhigi kartaa heerkulka iyada oo loo marayo uumi-biyoodka iyadoo adeegsi hooseeyo. Waxay leedahay qaababka qaar ka mid ah sida hoos ku qoran:
New PP Waxyaabaha jirka caag ah, Anti-UV, Anti-gabowga, waqtiga nolosha dheer. caddaan iyo cawl laba midab xulasho ah, Muuqaalka waxaa loogu talagalay deeqsi, jilicsan oo qurux badan.
Isticmaal awood yar oo aad u hooseeya 0.68kW / h & awood dhan 15000m3 / h qulqulaya, dabool 80-100m2.
LCD xakamaynta caddaynta biyaha + kontoroolka fog, 3 xawaare kala duwan, giraangiraha caalamiga oo quful leh. Waxaa jira wax ka badan culeyska iyo mashiinka ilaalinta, Baaskiil otomatig ah si loo daboolo aag weyn. Haanta biyaha ee weyn 100L. Waxaa jira buug gacmeed iyo iyo Auto laba dariiq oo laga galo tubbada biyaha.
Jirka caaga ah: 5years
Aagga Daboolka Hal Cutub 80-100m2
Qulqulka hawada (M3 / H) 13000/15000
Bixinta Hawada 12-15M
Haanta Biyaha 100 L
Isticmaalka Biyaha 10-15 L / H
Miisaanka saafiga ah 40Kg
Loading Tirada 106kumbiyuutarada/ 40HQ 42pcs / 20GP
Codsiga : XK-13 / 15SY qaboojiyaha hawada ayaa caan ku ah dukaanka, qolalka tababarka, saldhigyada, isbitaalka, maqaayada, beeraha, teendhada, supermarket, aqoon isweydaarsiga, bakhaarka iyo meelaha kale.
Hore: uumi-baxa guriga la qaadan karo oo qaboojiyaha hawada Shiinaha soosaara XK-06SY
Xiga: 18000m3 / h 23000m3 / h hawo weyn oo la qaadi karo hawada warshadaha biyaha qaboojiyaha hawada XK-18 / 23SY
Soo-saarista Qaboojiyaha Hawada
Qaboojiye Hawo Evaporative
Bannaanka Hawada qaboojiyaha
Xikoo Hawo qaboojiye